China ime ka data mbupụ na mba bụrụ ihe gbasara nchekwa obodo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » China ime ka data mbupụ na mba bụrụ ihe gbasara nchekwa obodo
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nyochaa nchekwa dị n'ime kwesịrị ịgafe ego, oke, ụdị dị iche iche na nzuzo nke data a ga-enye na mba ofesi ma chọpụta ihe ize ndụ dị otú ahụ nwere ike ibute na steeti na ọdịmma ọha na eze na ikike iwu na ọdịmma nke ndị mmadụ n'otu n'otu na òtù.
Ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịnye data na mba ọzọ ga-adị n'okpuru nyocha gọọmentị China.
A ga-enyocha ma a ga-ebufe data ahụ n'enweghị mmebi na ntapu.
E weputara usoro iwu a iji rịọ echiche ọha, nkwupụta Cyberspace Administration nke China (CAC) kwuru.
The Nlekọta Cyberspace nke China (CAC) wepụtara usoro iwu nke taa, na-ekwupụta na ụlọ ọrụ niile na-achọ ịnye data ná mba ọzọ nwere ike ịga na nyocha nke ime ụlọ na, n'oge ụfọdụ, a ga-enyocha nyocha gọọmentị.
E weputara usoro iwu a iji rịọ echiche ọha, nkwupụta CAC kwuru.
Ntụle nchekwa nke ime ụlọ kwesịrị ịgafe ego, oke, ụdị dị iche iche na nzuzo nke data a ga-enye na mba ofesi ma chọpụta ihe ize ndụ ndị dị otú ahụ nwere ike ime na steeti na ọdịmma ọha na eze na ikike iwu na ọdịmma nke ndị mmadụ n'otu n'otu na òtù dị iche iche, akwụkwọ ahụ kwuru.
Ọ gbakwụnyere ma a ga-ebufe data ahụ n'enweghị nsogbu na enweghị mmebi yana mwepu ga-enyochakwa.
Ọ bụrụ na anakọtara data ahụ site na nnukwu ọrụ akụrụngwa IT na China ma ọ bụ onye na-anakọta na-arụ ọrụ ụlọ akụ data nwere ozi nkeonwe nke nde mmadụ 1 ma ọ bụ karịa, a ga-edobe nyocha nchekwa na CAC.
Akwụkwọ ahụ kwuru na CAC ga-agakwa na nyocha nchekwa nke ịkekọrịta ozi gbasara mba ofesi nke mmadụ 100,000 ma ọ bụ karịa.